Oromiyaa irraa: Oduu gara garaa, Waxabajjii 2, 2018 -
By fmegersa | June 28, 2018
Uun Taarikuu dha. Dambi Doolloo,Riqicha Abbaa Torbee irratti kaafame. Waxabajjii 27, 2018
(WBO – Waxabajjii 28, 2018) Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Dhihaa tibbana miseensota WBO leenjii irra turan eebbisiise.
Sirna eebbaa kana irratti ummatni Oromoo Onoota garagaraa argamanuudhaan WBO cina jiraachuu isaa dalagaadhaan mirkaneessaniiru.
Ummanni Oromoo Naannoo Jimmaa Horroo, Gidaamii, Abootee, Qellem, Giraay, Laaloo, Garjeeda, D.Doolloo fi bakkoota biroo irraa ummatni baay’inaan guyyaa eebba WBO kana irratti argaman deggersaa fi tumsa ABO/WBOf qaban agarsiisanii jiru.
Ummatni Oromoo guyyaa kana WBO waliin oole WBO jabeessuuf battalumatti qarshii 8640 gumaachee jira.
Haga qabsoon Oromoo fiixa bahuttis, ummatni nagaa, qe’ee fi qabeenya isaanii tikfachuudhaaf bulchiinsa naannoo ofii akka to’atanii nagaa ofii tikfataniif caasaan ABO diriirsamee jira.
ABOnis akka ummanni walbulchuu fi nageenya isaanii gamtaan eeggatan hiree kanaan dhaamsa dabarseera. Via Dhábasá Wakjira Gemelal
#Shiroota-Yeroo ammaa humnooti farra Oromoo shiroota hojjacha ajiran keessaa:
1. Oromoo warra ollaa waliin walitti buusuu
2. Oromoota naannoo biroo keessa jiran irratti haleellaa fudhachuu
3. Haleellaa boombii bakka addaddaatti fudhachuu
4. Manneen sagadaa addaddaa ibiddaan gubuu
5. Kitaabota amantii ciranii manneen fincaanii keessatti gatuu
6. Walgahii fi hiriira gaggeeffamu gufachiisuu
7. Humnoota ibsaa, telee fi tajaajila geejjibaa irratti shira hojjachuu
8. Dinagdee biyyaa laamshessuuf shira addaddaa hojjachuu
9. Sharafa biyya alaa gogsuuf biyya alaatti doolara hambisuu
10. Sochii dhiheessii dinagdee irratti gufuu umuu fi kkf akka taán odeessi nu gahe ni hubachiisa.
*Shirooti kunneen bakka gariitti, hojiitti hiikamuu eegaleera. Asoosaa keessatti tarkaanfiin Oromoota irratti fudhatama ajiru itti fufiinsa, haleellaa naannoo Somaalee, ummatoota kibbaa fi naannoo Amaaraa ti.
*Masgiida ibiddaan gumuu, humna ibsaa ibiddaan gubuun shira hojiin mul’achuu eegalee dha.
*Hiriiraa fi walgahii gufachiisuuf boombii dhoosuu fi guyyaa san ibsaa balleessuu fi toora telee dhiphisuun eegalameera.
*Namoota biyya alaa irraa gara biyyaa seenan hordofuu fi sodaachisuun eegalameera.
*Humni hidhatee Finfinnee keesatti namoota irratti tarkaanfii fudhatu bobbaafamee jira. (of-eeggannoo gochuun barbaachisaa dha.
**Furmaatni, Oromoon karaa hundaan of-ijaaruu dha; rakkoo fi tarkaanfii fudhatamu kamiinuu otuu hin rifatiin, kaayyoo Oromoo milkeessuuf hojii jabaa fi amansiisaa galmeessaa adeemuu dha.
#Qaruuxummaa #Kutannoo #Ofkenniinsa #Dirqama
#DhaamsaHatattamaa-“Asoosaa keessatti namooti T-shirt suuraa Abiy qabu uffatan guyyaa daalacha ajjeefamaa jiru. Kana ajaja kan dabarse warra TPLF ti. Humni TPLF OPDO amma of-haaromse balleessuuf hidhatee hojjachaa jira. Qeerroon, poolisiin Oromiyaa, humni nageenyaa fi caasaan haqaa marti waan adeemaa jiru irratti dammaquu qaban. Fincilli guddaa Oromoo fi Oromiyaa irratti akka ka’uuf hojjatamaa jira.”
#Oromo #Oromiyaa #Ijaarsa #Ittisa #WBO
← ONN: Ajjeechaa Dr. Abiy Ahmed Irraatii Aggaamamee Ture Irratii Qophii Addaa, Waxabajjii 28, 2018 Ethiopian Parliament Passes Amnesty Bill into Law →